Nhau - Mutengi anobva kuAustralia, Singapore, Thailand akauya kufekitori yedu kwemazuva maviri kuferefeta nekushanya.
Mutengi anobva kuAustralia, Singapore, Thailand akauya kufekitori yedu kwemazuva maviri kuferefeta nekushanya.
Vakatarisa pane tambo yesimbi isimbi isina tambo ye1x61mm, ∮42mm, Panguva yekuferefeta, vatengi vakashanyira nzvimbo yekugadzira vakatarisa kugadzirwa kwesimbi yesimbi yesimbi tambo sampu ye1 × 61 mm, 42mm, kozoti musangano wehunyanzvi hwetambo nezve tambo yesimbi isina waya yakasungwa
Vashanyi vakagutsikana nehunyanzvi uye nemidziyo yefekitori yedu, vachiratidza kunzwisiswa kweramangwana pamwe nekubatira pamwe.
Zvinonzwisisika kuti fekitori yedu ichawana zvinopfuura chiuruTon maodha e1x61mm, ∮42mm tambo yesimbi isina waya tambo kana kubatana uku kuchibudirira.
Huru zvigadzirwa ndezvokusimudza tambo, zvekuchera tambo, ngarava tambo, petroleum tambo, chiteshi michina tambo, nezvimwewo. Inogona zvakare kuburitsa yakasarudzika yakasarudzika yakakosha simbi simbi waya tambo zvinoenderana nemutengi zvido, ine yegore kuburitsa 15,000 matani, kunyanya kugadzira simbi waya tambo tambo. ine dhayamita ye6.0mm-42.0mm. Iyo kambani ine yakasimba technical technical: iyo kambani ine technical technical kubva kune epakutanga Tianjin Yisheng avo vanga vachiita simbi tambo tambo yekugadzira kwemakore mazhinji.
Ndedzipi nzira dzakakodzera dzekushandisa nekuchengetedza tambo yetambo?
(1) Iko kumhanya kwetambo inomhanya tambo kunofanirwa kugadzikana panguva yekushanda, uye haifanire kudarika mutoro kudzivirira kushamisika mutoro;
(2) Kugadziriswa Iyo tambo yesimbi tambo yakavezwa nemafuta akakwana painogadzirwa, asi mushure mekushanda, girizi inozodzikira zvishoma nezvishoma, uye pamusoro petambo yesimbi tambo ichagara guruva, marara uye imwe tsvina, zvichikonzera waya yesimbi tambo nezvisote zvekupfeka nengura. Naizvozvo, inofanirwa kucheneswa uye kuwedzerwa mafuta nguva dzose. Iyo nzira iri nyore kushandisa bhurasho rewaya nezvimwe zvishandiso zvinoenderana nazvo kupukuta guruva uye imwe tsvina pamusoro petambo tambo, uye zvakaenzana shandisa iyo yakatsamwa uye yakanyunguduka tambo tambo pamusoro pegirizi pamusoro peiyo tambo yetambo, kana kumwaya 30 kana 40 injini yemafuta pamusoro petambo yetambo, Asi usasasa zvakawandisa nekusvibisa nharaunda;
(3) Yekuongorora zvinyorwa Iko kushandiswa kwetambo dzesimbi tambo dzinofanirwa kuongororwa nguva dzose uye kunyoreswa. Kunze kwekuchenesa kwataurwa pamusoro uye kuwedzerwa mafuta, zviri mukati mekuongororwa kwakajairwa kunofanirwa kuongororwa kuti ndeyekupfeka, waya dzakaputswa, ngura, uye hokore dzekuredza, mhete, uye mafuta. Pfeka zvezvikamu zvisina njodzi senge vhiri grooves. Chero chipi zvacho chisina kujairika chinofanira kugadziriswa kana kutsiviwa nenguva.